लिखुपिके अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई गरेको दुव्र्यवहारप्रति थुलुङ दुधकोशीद्धारा विरोध ! - Sagarmatha Online News Portal
लिखुपिके अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई गरेको दुव्र्यवहारप्रति थुलुङ दुधकोशीद्धारा विरोध !
सोलुखुम्बु । लिखुपिके गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बस्नेत र उपाध्यक्ष प्रमिला बस्नेतलाई कार्यकक्षमै दुव्र्यहार गरेकोप्रति थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले विरोध गरेका छन् ।
सडक उपभोक्ता समितिको विषयमा सामान्य विवादपछि उत्पन्न अराजक शैलीको अध्यक्ष राईले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाको विरोध गरेका हुन् । ‘गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आफ्नै कार्यकक्षमा रहेको समयमा शुभराम बस्नेतलगायत अराजक व्यक्तिहरुले नियोजित रुपमा गरेका हातपात र दुर्व्यवहारको घोर भत्र्सना गर्दछु,’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय सरकार प्रमुखको आफ्नै कार्यकक्षमा कार्यालय समयमा यस प्रकारको घटना हुनु अत्यन्त दुःखद र खेदजनक छ ।’
‘शुभराम बस्नेत लगायतका अराजक जथ्थाहरुबाट गुण्डागर्दी शैलीमा भएको हातपात र दुर्व्यवहारले विधिको शासनमाथीनै चुनौती खडा गरेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस घटनामा संलग्न दोषीलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरी कानूनी शासनको प्रत्यायभूति दिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
नेपाली कांग्रेसका शुभराम बस्नेतलगायतले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई कार्यकक्षमै दुव्र्यवहार गरेका थिए । दुव्र्यवहार गर्ने शुभराम बस्नेत, सरोज बस्नेत र टिकाराम खड्कालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरिसके छ ।